Degso 360 Total Security loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (1.35 MB)
Degso 360 Total Security,
360 Total Security waa softiweer antivirus ah oo dadka isticmaala siiya difaac buuxa oo fayras ah kombiyuutarkooda, oo ay weheliyaan astaamo dheeri ah oo dheeri ah sida dardargelinta kumbuyuutarka iyo faylalka qashinka.
Waxaad ka heli kartaa nooca ugu sarreeya ee 360 ​​Wadarta Amniga adoo adeegsanaya xiriirka hoose.
360 Wadarta Amniga Guud
Sidee loo rakibaa 360 Wadarta Amniga?
Fiidiyowga hoos ku xusan, waxaan kuu sheegnay sida loogu rakibo kombiyuutarka barnaamijka aadka loo isticmaalo ee amniga:
Waad iskaan ku mari kartaa oo ku nadiifin kartaa fayrasyada kombiyuutarkaaga taas oo ay ugu wacan tahay 360 Total Security, oo ah barnaamij antivirus ah oo aad kala soo bixi karto oo aad ku isticmaali karto bilaash. Barnaamijku wuxuu siiyaa dadka isticmaala 3 xulashooyinka iskaanka fayraska ee kala duwan. Baadhitaan deg deg ah, Scan buuxa iyo ikhtiyaarrada mabaadida Custom Scan ayaa kuu oggolaanaya inaad iska baarto fayrasyada sida aad u baahan tahay. Waxaa awood u leh 3 matoorrada aqoonsiga fayraska ee kala duwan, 360 Wadarta Amniga ayaa si otomaatig ah u falanqeynaya faylasha aad ka soo dejiso internetka, waxay hubineysaa dukaamayntaada internetka, waxay xannibi kartaa bogagga internetka ee xun, waxayna ilaalin kartaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed adoo hubinaya kamaraddaada, taas oo ay ugu wacan tahay habka ilaalinta waqtiga dhabta ahIntaa waxaa dheer, 360 Wadarta Amniga, oo si otomaatig ah u baaraya ulaha USB-ga iyo unugyada keydinta ee dibadda ee aad ku xirmeyso kombuyuutarkaaga, waxay kaloo ka caawisaa dadka isticmaala shabakadda ilaalinta.
360 Wadarta Amniga waxay xawaareyn kartaa xawaaraha kumbuyuutarkaaga adiga oo hubinaya waxyaabaha tooska ugu bilaabaya bilowga. Intaa waxaa dheer, 360 Wadarta Amniga, oo lagu ogaan karo feylasha qashinka ee nidaamkaaga, waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku tirtirto feylashaas hal guji oo aad kordhiso waxqabadka disk-kaaga adag ee ku xiran kumbuyuutarkaaga, taasoo kuu oggolaaneysa inaad hesho meel bannaan oo lagu keydiyo.
360 Wadarta Amniga waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay barnaamij antivirus bilaash ah oo faa iido leh isla markaana hodan ku ah muuqaalka isla markaana bixiya kahortaga fayraska ee horumarsan.
360 Total Security Noocyada
Cabirka Faylka: 1.35 MB
Horumar: Qihoo 360